Yoolalka Qalabaynta otomaatiga iyo dadaalka suuqgeynta | Martech Zone
Yoolalka Qalabaynta otomaatiga iyo dadaalka suuqgeynta
Jimco, Abriil 22, 2016 Jimco, Abriil 22, 2016 Douglas Karr
Waxaa jira isbeddello ka dhex jira warshadaha suuqgeynta dijitaalka ah ee aan indha indheyn ku sameyneyno kuwaas oo durba saameyn ku leh miisaaniyadda iyo ilaha - waana sii socon doonaan mustaqbalka.
Marka laga eego dhinaca maalgashiga, miisaaniyadaha adeegyada suuqgeynta ayaa waxyar kori doona sanadka 2016, ilaa 1.5% wadarta dakhliga adeegyada. Kordhinta ayaa dib u dhigi doonta koritaanka la filayo ee dakhliga adeegyada, hase yeeshe, iyadoo weli cadaadis dheeri ah saareysa suuqleyda si loo ballaariyo baaxadda iyo waxqabadka kaliya ilaha ugu yar ee dheeri ah. Xigasho: ITSMA
Marka la soo koobo, miisaaniyadaha loogu talagalay suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa sii kordhaya, suuqleyda heerka C-na waxaa hadda laga filayaa inay gacmaha isqabsadaan oo ay si buuxda u fahmaan kakanaanta muuqaalka, qalabka la heli karo, iyo soo gudbinta lagama maarmaanka u ah hagaajinta dadaallada soo iibsiga iyo haynta shirkadda. Marka la fiiriyo qarxinta kanaallada iyo baahida loo qabo in wax badan laga beddelo, Waxaan wax badan ku qabaneynaa wax ka yar… waana sii adkaaneysaa.
Inkastoo shaqaalaha suuqgeynta ayaa sii kordhaya, Filashada suuqleyda inay waxbadan kaqabtaan wax yar ayaa sii socota. Cadaadiska intiisa badani waa in la maalgashado aaladaha suuqgeynta ee ka caawiya yareynta tirada saacadaha aadanaha ee loo baahan yahay si looga jawaabo, loo qorsheeyo, loo fuliyo loona cabbiro dadaallada suuqgeynta.
Otomatiga iyo Sirdoonku waxay ku amaanan yihiin Kheyraadka Aadanaha, Iyagu Ma Beddelaan
Hay'addayada waxay xoogaa shaqo u qabataa qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn. Waqti kasta oo ka mid ah maalintii, waxaan u maleyneynaa inaan heysano 18 ama ilo aad u heersare ah oo ka shaqeynaya shaqada macmiilka. Laga soo bilaabo khabiirada astaanta, ilaa maareeyayaasha mashruuca, naqshadeeyayaasha, horumariyeyaasha, qorayaasha qormooyinka… liistadu way sii socotaa oo way socotaa Inta badan shaqadan waxaa lagu dhammeeyaa iskaashi lala yeesho ururada kale, in kastoo. Waxaan horumarinaa istiraatiijiyadda waxayna fuliyaan istiraatiijiyadda.
Qalabyadu waa hal dariiqo oo aan awood ugu yeelan karno inaan kor ugu qaadno taabashada macaamiisha iyo rajooyinka. Waxaan u adeegsanaa uruurinta dashboardka, warbixinta, daabacaadda bulshada, iyo qalabka maaraynta mashruuca. Hadafka aaladahaasi ma ahan iswada u shaqadeena, in kastoo. Hadafka aaladahaas ayaa ah in la kordhiyo waqtiga shaqsi ahaan aan u qaadano inaan la qaadano macmiil kasta si aan u sharaxno una wanaajinno istiraatiijiyadda aan soo bandhigeyno
Maaddaama aad raadineysid inaad maal gashato miisaaniyad si aad ugu shaqeyso otomaatiga howlaha gudaha, waxaan hubin lahaa in ujeeddadaadu aysan ahayn inaad beddesho dadka, waa inaad u fasaxdo inay ku sameeyaan waxa ay ku fiican yihiin. Haddii aad rabto inaad baabi'iso wax soo saarka kooxdaada suuq-geynta - sii wad iyaga inay ka shaqeeyaan waraaqaha iyo emaylka. Haddii aad rabto inaad sare u qaaddo wax soo saarka, ka dhig iibsiga qalabka mudnaan si kooxdaadu u hesho wax kasta oo ay u baahan tahay si loogu guuleysto.
Ugu dambeyntii, hadafka nidaam kasta oo la xiriira suuq-geyn waa inay noqotaa inay awood u siinayso wakhti wax soo saar badan oo leh rajooyinkaaga iyo macaamiishaada, oo aan ka yarayn. Wax badan u soo saar macaamiishaada waxaadna ka heli doontaa faa'iidooyinka. Tusaalooyinka qaarkood:
Waan isticmaalnaa Wordsmith ee Suuqgeynta si loo shaandheeyo loona soo bandhigo xogta Google Analytics qaab macaamiishayadu sifiican u fahmi karaan. Taasi waxay noo suurta gelineysaa inaan la xiriirno isbeddellada isla markaana aan bixinno istiraatiijiyad aan ku horumarinno halkii aan waqti ku qaadan lahayn isku dayga inaan sharraxno Analytics xogta.
Waan isticmaalnaa gShift si loola socdo baraha bulshada iyo raadinta saameynta midba midka kale iyo khadka hoose. Qaadashada way adagtahay, hadaanay macquul ahayn, qalab la'aan sida gShift. Haddii aadan si sax ah u cabbiraynin natiijooyinka istiraatiijiyaddaada, waxaad heli doontaa waqti adag oo sharraxaya sababta uu macmiilkaagu u sii wado maalgashiga.
Waan isticmaalnaaHootsuite, Kaydka, Iyo Jetpack si loo maareeyo dadaalkeena daabacaadda bulshada Intii aan nahay koox yar, waxaan ka dhex sameynaa buuq badan Internetka. Waqti yar ku luminta daabacaadda, waxaan awood u leeyahay in aan waqti badan ku qaato sidii aan ula macaamili lahaa dhagaystayaashayda warbaahinta bulshada.
Mid kasta oo ka mid ah qalabkani wuxuu awood noo siinayaa inaan xoogga saarno dadaalkeenna halka ay u baahan yihiin inay noqdaan halkii aan ka shaqeyn lahayn hawlo aan caadi ahayn oo macaamiisheennu waligood qiimeyn doonin. Waxay rabaan natiijooyin - waana inaan u shaqeynaa!
Tags: Analyticsyoolalka otomaatigaaaladaha iswadamarketingsuuq-geynta suuqawarbixinta
Qoraal Cajiib ah!
Waxaa ka mid ah aaladaha kale ee suuq geynta dijitaalka ah Goole Analytics waa midka ugu baahsan uguna isticmaalka badan. Maxay yihiin dhaqankaaga ugu fiican ee ku saabsan hirgelinta Google Analytics marka la eego iibka / kobaca dakhliga?
Hayso maalin weyn!
Taasi waxay kuxirantahay macmiilka, laakiin waxaan guud ahaan dooneynaa inaan abuurno fangasyo beddelaad ah oo dib ugalaabanaya wixii Wicitaan-Wicitaan ah illaa barta booqdaha soo galayo goobta. Iyo warbixinnada gaarka ah ayaa lagama maarmaan u ah yareynta jahwareerka macmiilka.